बच्चालाइ अर्को कोठामा राखेर ३० बर्षिया डाक्टरले छोडिन संसार – Nep Stok
बच्चालाइ अर्को कोठामा राखेर ३० बर्षिया डाक्टरले छोडिन संसार
माघ १५, २०७८ शनिबार 225
भारतमा भाजपा नेता र कर्नाटकका पूर्व मुख्यमन्त्री बीएस येदियुरप्पाकी नातिनी सौन्दर्याको संदिग्ध मृत्युले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ। तर, यो घटनालाई देहत्याग भनिएको छ । घटना हुनुअघि सौन्दर्याले आफ्नो बच्चालाई अर्को कोठामा छाडेर गएको बताईएको छ । त्यसपछि उनको कोठामा आएर झु ण्डी’एर दे’हत्याग गरेको घटना बाहिर आएको छ ।
सौन्दर्याका श्रीमान् डा. नीरज सदाझैँ शुक्रबार बिहान ८ बजे बेङ्लोरमा आफ्नो अफिस गएका थिए। सौन्दर्या र उनको बच्चा घरमा एक्लै थिए । केही समयपछि डा. नीरजलाई उनको कामदारले बोलाएर मेडम (सौन्दर्या) ढोका नखोलेको बताए । यो सुनेर डाक्टर नीरज रि’सा’ए र घर फर्किए ।
केहीबेर मै डाक्टर नीरज उनको घरमा आए र ढोका तो’डे’र घर भित्र पसे । कोठाको दृश्य देखेर उनको हो’श उ’डा’यो । त्यही कोठामा सौन्दर्याको शव झु ण्डि एको थियो । श्रीमतीको यस्तो हा’लत देखेर डाक्टर नीरज रि’साए । घटना तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।
प्रहरी उनको फ्ल्याटमा पुगेर सौन्दर्याको शव तल ल्यायो । त्यसपछि प्रहरीले पंचनामा लिई शवलाई पोष्टमार्टमका लागि बैंगलोरको बोरिङ र लेडी कर्जन अस्पतालमा पठाएको थियो । घटनास्थलमा प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ । अनुसन्धानका लागि पुगेका प्रहरीले घरमा त्यस्तो शं’का’स्पद केही नभेटेको बताएका छन्। यस मामिलामा हाई ग्राउन्ड पुलिस स्टेशनमा अ’प्रा’कृ’तिक मृत्युको एफआईआर दर्ता भइरहेको छ।
सौन्दर्याले आफ्नो बच्चालाई एउटा कोठामा छाडेर अर्को कोठामा झु’ण्डि’ए’र देहत्याग गरेको बताएका ह्चन । सौन्दर्याका आमाबुवा हुबलीमा थिए जब उनीहरूले यो दुखद खबर पाए। बेंगलुरुको बाहिरी भागमा रहेको डा नीरजको फार्म हाउसमा सौन्दर्याको अन्तिम संस्कार गर्न सकिने बताइएको छ ।
भारतीय समाचार माध्यमका अनुसार येदियुरप्पाकी नातिनी सौन्दर्या आफै पनि डाक्टर थिइन् र उनको उमेर मात्र ३० वर्ष थियो । उनको दुई वर्षअघि डा नीरजसँग विवाह भएको थियो । सौन्दर्या चार महिनाकी बच्चाकी आमा थिइन् ।
जानकारीका अनुसार सौन्दर्या येदियुरप्पाकी जेठी छोरी पद्माकी छोरी थिइन् । कर्नाटकका गृहमन्त्री अरगा ज्ञानेन्द्रले सौन्दर्या गर्भवती भएपछि डि’प्रे’स’नको सि’का’र भएको बताए ।
Prev२ हजारका लागि आफ्नै बुबाको घाँ’टी थि’चेर ह’त्या गरे (भिडियो हेर्नुस)
Nextचक्कु प्रयोग गरी १६ महिनाको वावुको ज्यान लिइयो, ५ बर्षकी छोरीमाथी समेत चक्कु
हिउँ खेल्नएका दुई किशोर ११ दिनपछि मृत अवस्थामा फेला
ललितपुरमा ढल खन्दा फेला पर्यो यस्तो अंशु वर्माको शिलालेख, त्यसमा लेखेको लेखवाट अनुसन्धानकर्ता अचम्म
नाग ले दुध पिएको देख्ने व्यक्ति अत्यन्त भाग्यमानी,फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस !
घाँस काट्ने क्रममा खान आएको बा’घसँग ल’डेर आफ्नो ज्या’न जोगाएकी दुर्गा’को स’हासलाई सलाम’